Vashanu Nyowani Mini Vhidhiyo Tutorials kubva kuApple pane iyo iPhone | IPhone nhau
Nyowani Apple Vhidhiyo Tutorials Kusimbisa Nyowani iPhones Zvimiro
Nacho Aragonés | | Zvidzidzo uye zvinyorwa
Apple iri kutsikisa akawanda mafupi mavhidhiyo pane yayo yepamutemo YouTube chiteshi maari anoedza kutsanangura nenzira yakapusa mashandisiro avo, mamwe manomano uye, zvokwadi, kuti uwane sei zvakanyanya kubva kumakamera.
Panguva ino, Apple yakaisa mavhidhiyo mashanu matsva kune yayo YouTube chiteshi ine mashanu akasiyana mini-tutorials asingagari anopfuura masekondi gumi neshanu.
Yekutanga yemavhidhiyo, "Usanetseke nezvekurasa mvura", inotiyeuchidza izvozvo kubvira iyo iPhone 7, Apple mafoni haana mvura. Rangarira kuti kuramba mvura, izvo zvisina kufanana nekuve mudziyo wakagadzirirwa kushandiswa kunyudzwa. Zvakadaro, kana tikainyorovesa kana kuwira mudziva, rinofanira kusimuka risina kana chinorova.
Vhidhiyo yechipiri, "Shandisa kumeso kwako se password yako", inotiyeuchidza izvozvo FaceID haina kushandiswa chete kuvhura yedu iPhone, asi zvakare inotibvumidza isu kuvhura maapplication uye kuwana mapassword ye Autofill nyore.
Vhidhiyo yechitatu, "Tsvaga iyo chaiyo pfuti", inotiratidza sei, nekuda kweRarama Photo, tinogona kudzvanya pa "edit" mune chifananidzo uye kutsvedza kuburikidza nemhando dzakasiyana dzemufananidzo kusvikira tazowana iyo yakanaka nguva kuti iite iri kiyi pikicha.
Vhidhiyo yechina, "Taura nenyanzvi", inotidzidzisa zviri nyore sei kubata Apple rutsigiro uye kutanga chat mumaminetsi mashoma. Tichazongoda kurodha pasi Anotsigira app, tizvizivise pachedu uye tevera nhanho kana tiine dambudziko kana mubvunzo.
Vhidhiyo yechishanu neyekupedzisira ndiyo ipfupi pane zvese, "Nyore pinda yako yekukwira". Zvinotiratidza rimwe remabasa eWallet ayo anotiratidza isu yekukwira yekupfuura pane yekuvharira maawa mashoma usati wabata ndege. Inonyanya kubatsira kukurumidza kupfuura kuburikidza nekuchengetedza chengetedzo uye ona iro boka rebhodhingi kana chigaro chako nekukurumidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Nyowani Apple Vhidhiyo Tutorials Kusimbisa Nyowani iPhones Zvimiro
Apple inotenga Lighthouse patents zvine chekuita nekamera uye nehungwaru hwekunyepedzera
Apple Music haisi kuzonyunyuta nezve kukwira kwemitero kune maartist muUnited States